Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo heshiis qaadatay shirkada Atlantic Marine. – Radio Daljir
Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo heshiis qaadatay shirkada Atlantic Marine.
Luulyo 31, 2013 10:48 g 0
Muqdisho, July 31, 2013 – Shirkadda Atlantic Marine and offshore Group oo ah mid ka shaqeysa arrimaha ilaalinta badaha aduunka ayaa la shaaciyey in ay ka howl-geli doonto xeebaha dalka, iyadoo ka shaqaynaysa amaanka xeebaha Soomaaliya iyo dar-dar gelinta howlaha ciidamada badda ee dalka Soomaaliya.
Wasaarada Gaashaandhiga ?Soomaaliya ayaa heshiis cusub la saxiixatay shirkada Marine and Offshore oo laga leeyahay dalka Holland, waxaana masuuliyiinta shirkada iyo wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuudf (Fiqi) ay si rasmi ah u kala saxiixdeen heshiiska oo buuxa.
Heeshiiska ayaa ku qotoma dib u dhiska ciidanka badda ee Soomaaliya iyo in ?ilaalo fiican loo helo xeebaha dalka Soomaaliya, oo inta badan ay ka jiraan dhibaatooyin Burcad badeed iyo weliba Jariif ba?an oo ay ku hayaan xeebaha Maraakiib shisheeye.
War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay heshiiska in la gaaray, sidoo kale waxaa lagu iftiimiyey qoddobada lagu heshiiyey oo ay ku jiraan, La socodka dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo dekedaha, Difaaca kheyraadka dabiiciga ah, Difaaca kalluumeysiga sharci darrada ah ee maraakiibta ajaaniba ah iyo waxyaabaha saldhigga u ah, Ka hortagga sunta lagu daadiyo xeebaha dalka Soomaaliya.
Docda kale waxaa war-saxaafadeedka lagu shaaciyey shirkadu in ay ku howl-geli doonto awaamiirta dowladda Soomaaliya, taasi oo ah heshiis guud oo ay wada gaareen shirkada iyo Madaxda wasaarada gaashaandhiga ee Soomaaliya.
Xeebaha Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan, waxaana heshiiska dowladda Soomaaliya uu ku soo beegmayaa xili ay xeebaha dalka joogaan Maraakiib waa weyn oo ilaaliya xeebaha isla markaasna la dagaalama Burcad badeeda, in kastoo UN Monitoring Group ay sheegeen in Burcad badeedii ay weli joogaan xeebaha balse ay shaqo ka heleen Maraakiibta Jariifka ah.
Baahin: Arbaca, 31 July 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso